Acid / Alkaline | Ọkọwa Okwu Ahụike
Acid Reflux Ma Ọrịa Canat.
Nwere ike mmeju akpọ MSM ịbụ Azịza?
Acid reflux ma ọ bụ gerd (ọrịa gastroesophageal reflux) bụ ọnọdụ nke mmiri si na afọ ya na-apụta site na afọ n'ime mkpụrụ akụkụ. Ngwurugwu a nwere otutu acid na ụfọdụ pepsin na bile. Mmiri atọ a dị ize ndụ nye anụ ahụ na-emetụta ya, ebe acid bụ ihe kachasị emerụ ahụ. Mmiri a na-egbu egbu nwere ike ịmịkọrọ ma mebie oghere nke esophagus (esophagitis). Ọ bụrụ na-ekwe ka ọnọdụ a bụrụ nke na-adịghị ala ala, ọ nwere ike ịmalite ka oge na-aga n'ime mkpụrụ nke Barrett, nke bụ ihe ga-ebute ọrịa cancer esophageal.
Kedu ihe dị iche na Ọrịa Alzheimer na Dementia?
N’oge na-adịghị anya, dementia bụ ọrịa, ọrịa Alzheimer bụ ihe kpatara mgbaàmà ahụ. Ọ bụrụ na a gwa mmadụ na ha nwere dementia, ọ pụtara na ha nwere ebe nchekwa dị mkpa […]
Golọ Gout Remedies. Ihe mere ha ji dị ha mkpa.
Gout bụ usoro dị omimi nke ọrịa ogbu na nkwonkwo nke na-egosipụta na mberede, ọgụ siri ike nke ihe mgbu, ịcha ọbara-ọbara na ịdị nro na nkwonkwo, oge mgbe ọ bụla na - agbatị ụkwụ. Mwakpo ndị a nwere ike ime ugboro ugboro belụsọ na agwaghị gout. Ka oge na-aga, ha nwere ike imebi nkwonkwo, akwara na anụ ahụ ndị ọzọ. Ndị nwoke nwere ike inwe gout, mana ụmụ nwanyị na-enwewanye ike ịgakwu gout mgbe ha nwechara isi.
Clifford Nwere ike 7, 2019
Acids na Alkalis. Na mgbọrọgwụ nke ọrịa ọ bụla bụ ọnọdụ acidic. Nje bacteria, nje, yist, ete, ero na akwara na-eto n’onodu acid.